1. Akụkọ banyere mmalite nke gloves nwere ike iwepu n’afọ 1889, akpa amụrụ ụzọ eji emefu mkpofu amụrụ n’ụlọọgwụ nke Dr. William Stewart Halstead. N'ime usoro ịwa ahụ, uwe mkpofu nwere ike ọ bụghị naanị na ị ga-ahụ mgbanwe nke aka dọkịta, kamakwa ọ dị ukwuu ...GỤKWUO »
Etu esi eji eriri ọbara ọbara? Ugbu a, ọtụtụ mmadụ na-etinyekwu uche na ahụ ike ha ma na-aga na Medicallọ Ọrụ Ahụike iji nye ahụike ha maka nyocha zuru ezu. N'ihi nke a, mkpa ọgbụgba ọbara dị ugboro atọ karịa ka ọ dịbu. Otu esi eji eriri lancet wee bụrụ akwa ...GỤKWUO »
ORIENTMED mepere webụsaịtị ọhụụ
Na Septemba 15, ORIENTMED bụ opean webụsaịtị ọhụrụ ya. Isi ngwaahịa ndị ORIENTMED bụ ndị a: 1. Sirinji a na-ekpofu ekpofu, agịga hypodermic, ntinye infusion, vein vein set, IV Cannula, lancet blood, scalpel, tube collection collection, akpa ọbara, akpa mamịrị. 2. Disposable uwe, dị ka l ...GỤKWUO »